musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » New York JFK ndege kuenda kuLisbon paTAP Air Portugal izvozvi
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • nhau • vanhu • Portugal Kuvhuna Nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
New York JFK ndege kuenda kuLisbon paTAP Air Portugal izvozvi.
TAP's gumi ekuNorth America magedhi parizvino anosanganisira Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, uye Washington, DC (Dulles).
TAP Air Portugal inodzokera kuNew York's JFK neNewark airport nendege kubva kuLisbon.
TAP ichashanda zuva nezuva zvisingamisiki kubva kuJFK kubva Mbudzi 7 kusvika Ndira 31, 2022, ichidzika kusvika ina nendege pasvondo kubva Kukadzi 2 kusvika Kurume 25.
Ndege itsva, TP 210, ichasimuka kuJFK na10pm, ichisvika muLisbon na9:30am, mangwanani anotevera.
TAP Mhepo Portugal iri kushanda zvakare kubva kune ese manomwe emasuwo ayo ekuUS nekudzoka kwesevhisi kubva kuNew York's John F Kennedy International Airport manheru apfuura. Nesevhisi yemazuva ese kubva kuJFK kusvika munaNdira uye yemwaka wezhizha, New Yorkers ichave nendege nhatu dzezuva nezuva kuenda kuLisbon paTAP, kubva kuJFK neNewark Liberty International.
pombi ichashanda zuva nezuva pasina kumira kubva JFK kubva muna Mbudzi 7 kusvika Ndira 31, 2022, ichidzika kusvika ina nendege vhiki nevhiki (neMuvhuro, Chitatu, Chishanu neSvondo) kubva Kukadzi 2 kusvika Kurume 25. JFK sevhisi ichashanda zuva nezuva zvakare muzhizha, kutanga Kurume 27.
Ndege itsva, TP 210, ichasimuka kuJFK na10pm, ichisvika muLisbon na9:30am, mangwanani anotevera. Ndege inodzoka, TP 209, ichabva kuLisbon na5pm, ichisvika kuJFK na8pm.
Nzira itsva ichashandiswa neTAP's Airbus A330-900neo ndege, ine Airspace itsva neAirbus kabhini.
Kugadziriswa kwekabhini uye dhizaini inogadzira chimiro chakagadziridzwa, chemazuva ano, chine zvigaro zvakadzika zvakadzika muEconomy, muchigaro chevhavha mimvuri yegirinhi uye grey, uye ine imwe legroom muEconomyXtra, mumumvuri wegirinhi uye tsvuku.
Nzvimbo yekugara muhupfumi hwenguva dzose inches makumi matatu nerimwe, ukuwo EconomyXtra ichipa imwezve inches matatu eimba yemakumbo, yepitch ye31 inches. Iyo A34-330neo ine zvigaro zana nemakumi matanhatu nesere muEconomy uye zvigaro makumi mapfumbamwe nematanhatu muEconomyXtra.
MuTAP's Executive bhizinesi kirasi, TAP inopa makumi matatu nemana matsva-akafuratira akatsamira macheya anodarika mafiti matanhatu pakureba kana akatsiga zvizere. TAP's bhizinesi kirasi zvigaro zvinosanganisira zvitoro zveese maUSB uye ega ega maplugs emagetsi, zvinongedzo zvemahedhifoni, mwenje wekuverenga wega, uye imwe nzvimbo - kusanganisira yakawanda yekuchengetera imba.
TAP's gumi ekuNorth America magedhi parizvino anosanganisira Boston, Cancun, Chicago, Miami, Montreal, Newark, New York (JFK), San Francisco, Toronto, uye Washington, DC (Dulles). Musi waDecember 10, TAP Mhepo Portugal ichaunzawo mashandiro ayo ekutanga eCaribbean, nesevhisi isingamire pakati peLisbon nePunta Cana muDominican Republic, TAP's 11.th North America gateway.